Headspace အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（21.7MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Headspace: Meditation & Sleep
စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်း။ အသံကိုအိပ်ပါ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းရှိနေ့အနည်းငယ်အတွင်းရှိတရားအားထုတ်ခြင်းနှင့်သတိရှိခြင်း၏ဘဝပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းရည်များကိုလေ့လာပါ။ ရာနှင့်ချီသောပဲ့ထိန်းသောတွေးခေါ်မှုများမှရွေးချယ်ခြင်း - စိတ်ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စိုးရိမ်စိတ်များစီမံခန့်ခွဲမှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ0န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမှတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း,
ဤလမ်းညွှန်သင်ကြားမှု, သတိပ and free free free app ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ ထို့နောက်နောက်သို့ထိုင်ပါ, အသက်ရှူပါ, သင်၏အတွေးများကိုအေးအေးဆေးဆေးအေးဆေးစေရန်, အချိန်မရွေး, မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုတွေးတောဆင်ခြင်ပါ။ ပို. အေးဆေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းသော, ပိုမိုကျန်းမာသန်စွမ်းသောဘဝကိုစတင်ပါ။
headspace ဆိုတာနေ့စဉ်ဘဝအတွက်တရား0င်လမ်းညွှန်မှုလမ်းညွှန်ပါ။ World-Class ကျွမ်းကျင်သူများမှ Headspace Co-Founder Puddicombe ကဲ့သို့သောတရားအားထုတ်ခြင်းနှင့်သတိစွမ်းရည်များကိုလေ့လာပါ။ သင်အာရုံစိုက်ရန်, BR>
ဘာကိုတွေးတောဆင်ခြင်နိုင်မလဲ, ။ သင်တစ်ခါမှမဖူးဖူးသော်ငြားသင်ဘယ်လိုမျှမတွေးတောဆင်ခြင်ဖူးပါကအခမဲ့အခြေခံလမ်းကြောင်းသည်သင့်အားတရားအားထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။
Headspace Tab ဖြင့်အိပ်ပျော်ခြင်း, အေးဆေးတည်ငြိမ်နှင့်အနားယူ၏။ အကယ်. သင့်အိပ်ပျော်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြ problems နာများအိပ်ပျော်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြ problems နာများပြ problems နာများပြ problems နာများရှိပါကခေါင်းစီးဖြင့်အိပ်စက်ခြင်းဖြင့်အိပ်စက်ခြင်းသည်သင်၏စိတ်ကိုအိပ်ရာဝင်စေနိုင်သည်။
○စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဟုတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း - စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုစီမံခြင်း, စိတ်ဖိစီးမှုကိုကာကွယ်ခြင်း, တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်း, မငြိမ်မသက်ခြင်း, ○လှုပ်ရှားမှုနှင့်အားကစားတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း - လှုံ့ဆော်မှု, ချစ်ခြင်း, လေ့ကျင့်ရေး, ပြိုင်ဆိုင်မှု, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများ - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးသတိထားခြင်းနှင့်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းသင်တန်းများ - သတိရှိသောအစားအစာ, နာကျင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း, နေအိမ်
သည်အိမ်မှအာရုံစူးစိုက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းဂီတသို့0င်ရောက်ခြင်းအတွက်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းမှ) HeadSpace ၏ Music Officer, John Legend နှင့် Madlib ကဲ့သို့သောအနုပညာရှင်များမှဂီတအသစ်နှင့်တေးဂီတအသစ်နှင့်ညှိပါ။ သို့မဟုတ် Lo-Fi Times နှင့် Separt Booth Jazz အပါအ0င်ကွဲပြားခြားနားသောအာရုံစူးစိုက်မှု 12 ခုမှရွေးချယ်ပါ။
အိုလံပစ်သင်တန်းပို့ချသူ ဦး ဆောင်သောအိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများကိုတိုးမြှင့်ခြင်း, ပါဝင်သည်: ○အမြန်လေ့ကျင့်ခန်း - စိတ်ဖိစီးမှုများ, လှုံ့ဆော်မှု, အမှုန့်များဖြည့်တင်းခြင်းများနှင့် 28 ရက်ကြာသင်တန်းများ - Trustful-LED သင်တန်းများနှင့်အတူသတိရှိရှိလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုတည်ဆောက်ရန် Cardio - သင်၏နောက်ပြေးပွဲကိုနားထောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လမ်းလျှောက်ခြင်းအတွက်နားထောင်ခြင်း
သင်၏တစ်နေ့တာကိုတောက်ပစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောနေ့စဉ်ဗီဒီယိုစီးရီးများဖြင့်စတင်ပါ။ ကျွမ်းကျင်သူများမှအကြံဥာဏ်များ, ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်သင်ပြုံးရန်လှုံ့ဆော်မှုများပါဝင်သည်။
○ SleeSTSTASDS - REATION TOSS unwind နှင့်အေးအေးဆေးဆေးအေးဆေးစွာဖြင့်ဆက်နွယ်သောအသံများနှင့်တွဲဖက်ထားသောမူရင်းပုံပြင်များ စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအိပ်ရန်
။ အကြောင်းအရာများတွင်အိပ်စက်ခြင်း, နိုးပါ။ စိတ်အေးအေးထားပါ။
လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အသက်ရှူခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းများအေးဆေးတည်ငြိမ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်အိပ်စက်ခြင်းကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းသင်တန်းများ
headspace နှင့် Move Mode ဖြင့်အိပ်ရန်အပြည့်အဝလက်လှမ်းမီခြင်း - သင်၏ဘ0၏အစိတ်အပိုင်းတိုင်းကိုသတိနှင့်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းကိုယူဆောင်လာပါ